I-Breezy 2BHK-5Mins Frm Manyata, Sobha & BhartiyaCity - I-Airbnb
I-Breezy 2BHK-5Mins Frm Manyata, Sobha & BhartiyaCity
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAsgar
Wamkelekile kwikhaya lakho kude nekhaya! Ikhaya elifakwe ngokupheleleyo, lilungele ukuya kwiindwendwe ezi-6. Ibekwe ngokucwangcisekileyo eMantla eBangalore, kufutshane neManyata Tech Park, Bhartiya City, Sobha City kunye nezinye iiSEZ ezininzi. Ngokucacileyo i-3-4 kms kude ne-Hebbal Ring Road kunye neSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe kukuhamba nje kwemizuzu engama-20-25. Ikhaya lam lilungele iintsapho ezinabantwana kunye nabahambi beshishini.
Ibhedi enefenitshala epheleleyo eyi-2, ikhaya lokuhlamba eliyi-2 elitofotofo leendwendwe eziya kutsho kweziyi-6. Kwabo bayazixabisa iingenelo zokuhlala kwikhaya elitofotofo, kwimizuzu nje eyi- ukusuka embindini wedolophu yaseBangalore, ikhaya lam lineendawo ezitofotofo nezifudumeleyo kwisixeko esikhulu. Igumbi ngalinye lokulala linefenitshala yeebhedi ezimbini ezifanayo ezinokudityaniswa zibe yibhedi enkulu ekuthiwa yiKing Sized. Igumbi lokuhlala line-TV engasetyenziswayo, i-Invaila kwaye inefenitshala yebhedi etofotofo, itafile yokutyela enamagumbi ayi-4 kunye neTafile yeZiko, zonke zisuka kwiNqanaba lasezidolophini! Ikhitshi lixhotyiswe ngeFriji yeFriji, i-Tapps Bread Toaster, i-Induction Cooktop kunye nezinye izixhobo kunye neetafile.
Nceda ufunde ezi zinto zilandelayo ngononophelo uze uqinisekise ukuba uyifundile ibe uyavumelana noku kulandelayo, ngaphambi kokuqinisekisa ukubhukisha:
- Nceda uqaphele ukuba le flethi ikumgangatho wesine. Ukuba uneendwendwe ezindala okanye iindwendwe ezingakwazi ukuthatha izitepsi, nceda ucele umphantsi osezantsi. Njengoko kuchaziwe, ilifti ayisebenzi kwimeko yombane.
- Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
- Ubungqina besazisi obuchanileyo buza kunikezelwa kumntu omdala ohamba naye, kuquka umntu obhukishayo, ngaphambi kokuba ahlale kwiflethi.
- Iipati nemicimbi ayivumelekanga.
- Ii-scorts azivumelekanga.
- I-Air conditioning iza kutsalwa kwi-Rs eyongezelelweyo. 500/Usuku.
- Ukuhlala ixesha elingaphezu kweentsuku eziyi-7 kuza kutsala imali yokucoca eyi-Rs. 100/ qho xa ucoca, ibe ubuncinane kukho izihlandlo eziyi-3 zokucoca ezinyanzelekileyo ngeveki.
- Kwimeko apho ulahlekelwa zizitshixo zeflethi okanye indlu ekwicomplex, kuza kufuneka ubhatale imali yokutshixa endaweni yesitshixo (malunga nee-rupees eziyi-4 500). Isitshixo esingasetyenziswayo asizukuqinisekisa ukukhuseleka kwezinto zakho neflethi okanye indlu ekwicomplex.
- Nceda uqiniseke ukuba ucima zonke izibane, iifeni, iTV kunye neGeysers ngaphambi kokuba uphume kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex. Umbane = Amanzi, ngoko nceda wonge!
- Imali yokucoca ebhatalwa kube kanye ngoxa kubhukishwa ifakwa ekucoceni iflethi emva kokuba uphumile, ukuze indlu icoceke ize ifumaneke kundwendwe olulandelayo. Iinkonzo zokucoca/zokucoca indlu ngexesha lokuhlala kwazo zibhataliswa i-Rs. 100 kwiseshoni nganye.
- I-elevator, i-Air conditioner, i-Microwave, i-Induction & Water Heater aziyi kufumaneka xa kunqunyanyiswa umbane.
- Iindwendwe zicelwa ukuba zinikezele ngefoto ekwisazisi esikhutshwe ngurhulumente kunye nedilesi, ngokwezikhokelo zeSebe Lezokhenketho LikaRhulumente laseKarnataka.
- Ukuba awuyonxalenye yeqela lokuhamba okanye ubhukishela umntu, yimbopheleleko yakho ukuchazela Imithetho Yekhaya kunye Nemithetho Eyongezelelweyo.
4.86 out of 5 stars from 230 reviews
4.86 · Izimvo eziyi-230
Ifakwe kwindawo ezolileyo eMntla Bangalore, ikhaya lam likufutshane kakhulu kwiiPaki ze-IT (iManyata Tech Park) iiMall (MSR Elements Mall), izibhedlele, iZikolo, iiKholeji, iiNdawo zokutyela, iiVenkile zeKofu kunye nezinto ezininzi eziluncedo.
Umbuki zindwendwe ngu- Asgar
Le ndlu ikude ngeemitha eziyi-100 ukusuka kwindawo yam, ngoko ndikufuphi! Ndisebenza phesheya, kodwa ndenza konke okusemandleni am ukuphendula imibuzo/ukufowunelwa ziindwendwe. phantse ngoko nangoko. Xa ndingekho, umntu ondincedayo uza kundinceda ndiqinisekise ukuba iindwendwe ziba nexesha elimnandi.
Le ndlu ikude ngeemitha eziyi-100 ukusuka kwindawo yam, ngoko ndikufuphi! Ndisebenza phesheya, kodwa ndenza konke okusemandleni am ukuphendula imibuzo/ukufowunelwa ziindwendwe. pha…